October 18, 2021 - Babal Khabar
Oct182021 by बबाल खबरNo Comments
पहिले यो भिडियो हेर्नुस, धेरैलाई राति अबेरसम्म निन्द्रा लाग्दैन। निद्रा बोलाउनका लागि केही मान्छे घन्टौंसम्म ओछ्यानमा यता र उता पल्टिन्छन्। ‘लौन, कुनै जादू मन्त्र पाएदेखि फुस्स निदाउँथें नि’ भनेर कल्पन्छन् यस्ता मान्छे।यस्ता मान्छेका लागि एउटा जादू उपाय आएको छ । यो हो एक्युप्रेसर र यसले अ'निद्रा लगायत शरीरका धेरै सम'स्या समाधान गर्छ । तपाईंले शरीरका विशेष भागमा दबाब दिनुभयो भने शिशुले जस्तो सुत्न सक्नुहन्छ ।आरामले सुत्नका लागि तपाईंले शरीरका तीन विन्दुमा दबाब दिनु जरूरी हुन्छ। गोडाको बुढी औंला र दोस्रो औंलाबीचको माथिल्लो भाग। सुत्नुअघि यहाँ चारदेखि पाँच सेकेन्डसम्म थिच्नुस् । कुन अंग द'बाउँदा के हुन्छ ? नाडीबाट तीन औंलाको दूरी माथि रहेको भाग । यहाँ पाँच मिनेटसम्म द'बाब दिनुभयो भने सुत्न सजिलो हुन्छ। पाइतालाको मध्यभाग। यहाँ चाहिँ पहिला ३० सेकेन्ड दबाब दिनुस्, त्यसपछि पाँच से
पुरा खबर, आफ्नो श्रीमानलाई खुसी राख्नकाे लागि हरेक विवाहित महिलाको चाहना हुन्छ । तर कतिपय कारण र श्रीमानको भावनालाई बुझ्न नसक्दा श्रीमतीले श्रीमानलाई खुसी पार्न सकिरहेका हुँदैनन् ।यस्तो अवस्थामा श्रीमती श्रीमान्लाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने बिषयमा निकै चिन्तित भेटिन्छन् । १० यस्ता टिप्सहरु, जसकाे उपयाेगले श्रीमानलाई खुसी बनाउँन सकिन्छः जान्नुहाेस्,र हेर्नुस यो तलको भिडियो, – श्रीमानको रुची बुझ्नुहोस् स् कतिपय महिला विवाहपछि आफ्नो आंकक्षा श्रीमानले पूरा गरुन् भन्ने चाहाना राख्छन् । तर श्रीमानको सौख र रुची के छ त्यसमा ध्यान दिदैनन् । त्यसैले तपाईंले श्रीमानको रुची र चाहना बुझेर त्यसमा ध्यान दिनु भयो भने यसले श्रीमानलाई खुसी पार्दछ । – श्रीमती होइन साथी बन्नुहोस् स् श्रीमान–श्रीमतीको सम्बन्ध साथीको झै हुनुपर्छ । श्रीमान उदास भए उसको दुखको कारण बुझ्नुपर्छ । कुनै समस्यामा भए त्यसबाट
हेर्नुस यो भिडियो, दहीको स्वाद मात्र स्वादिष्ट हुँदैन कि यसले शरीरमा लाग्ने कैयौँ रोगबाट पनि छुट्कारा दिलाउँछ । शरीरका लागि निकै स्वस्थकर मानिने दहीले मुटुरोगको सम्भावनाबाट समेत बचाउने एक अध्ययनले देखाएको छ । ५५ हजार आठ सय ५५ जना मानिसमा गरेको अनुसन्धानपछि यस्तो निष्कर्ष निस्केको हो । यी हुन् अध्ययनले निकालेका निष्कर्ष : नियमित डाइटमा दहीको मात्रा बढाउँदा मुटुलाई स्वस्थ राख्नुका साथै यससँग जोडिएर आउने रोगको सम्भावनाबाट पनि बचाउने काम गर्छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ। अमेरिकन जर्नल अफ हाइपरटेन्सनमा छापिएको एक स्टडीमा खानासँग दहीको प्रयोग गर्दा वयस्क मानिसलाई हाइपरटेन्सनको समस्याबाट छुट्कारा दिलाउँछ । जसले हप्तामा दुईपटक दहीको प्रयोग गर्छ, उसलाई भविष्यमा हुने स्ट्रोकको सम्भावनामा २० प्रतिशत कम गर्छ ।यसका साथै दहीले पाचनप्रणालीमा सहयोग पु(याउनुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि
पुरा खबर, प्राय:जसो मानिसहरु विवाह गरेपछि वा विवाह नहुनुअघि निकै नै फरक हुन्छन्। कुनै मानिस विवाह गरेपछि निकै नै खुसी हुन्छन् भने कुनै मानिस निकै नै निराश हुने गर्छन् । त्यस्तै नयाँ जानकारीको लागि यदि तपाईंको नामको अगाडीको अक्षर ही, हू, हे, हो, डा, डू, डी, डे वा डो आउँछ भने तपाईंको राशी कर्कट हो । यो राशी हुने मानिसहरुको विवाहपछि निकै नै भाग्य चम्किने ज्योतीष शास्त्रको दाबी समेत रहेको छ। त्यस्तै कर्कट राशी हुने मानिसहरु इमान्दार, जिम्मेवार र कर्तब्यनिष्ठ पनि हुने ज्योतिष शास्त्रले दाबी गरेको छ। कर्कट राशी हुनेहरुको जीवनमा विवाहको कुरा चल्दा आफ्ना आमाबाबुले हस्तक्षेप गर्छन् जुन कुरा उनीहरुलाई भने मन पर्दैन्। तर, विवाह भएपछि निकै नै सुखी हुन्छन् । कर्कट राशीको मानिसको भाग्योदय विवाहपछि नै हुन्छ । विवाह पछि भाग्य र परिवर्तन यस राशीको मानिसको जीवनमा विवाहले ठूलो परिवर्तन ल्या
पहिले यो भिडियो हेर्नुस, तपाई आफुलाई मन परेको मान्छेको प्यारो बनाउन चाहानुहुन्छ ? चर्चित लेखिका Leil Lowndes ले यस बारे एक किताब लेखेकि छन्,”How to Make Anyone Fall in Love with You” जसमा तपाईले आफुले चाहेको व्यक्तिलाई कसरी आफु प्रती आकर्षित गर्ने भन्ने बारेमा केही टिप्सहरु दिईएका छन् । ति मध्ये केही टिप्सहरु यस प्रकार छन्; १. उसलाई आफु तर्फ आकर्षित गर्ने पहिले तरिका हो, उसको आँखामा लगातार केही समयसम्म हेरीरहनु । यो केटा र केटी दुवैको लागी लाभदायक हुन्छ किनकी दुवै चाहान्छन् कि कोही आफुलाई राम्रो ठानेर हेरीरहोस र आफु प्रती उसको ध्यान आओस । २. एक साधारण मुस्कानले तपाईले भन्न नसकेको धेरै कुरा भनिदिन्छ त्यसैले उसको अगाडी पर्डा सधै सुन्दर मुस्कान दिन नबिर्सनुहोला । यो पनि पढौ : दाँतको बीचमा खाली ठाउँ हुनेको भविष्य कस्तो ? सामुन्द्रिक शास्त्र एउटा विस्तृत विधा हो। यसमा व्
पुरा खबर, अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ अर्ली टू बेड एण्ड अर्ली टू राइज, मेक्स अ म्यान हेल्दी, वेल्दी एण्ड वाइज । अर्थात् जो मानिस रातमा छिटै सुत्ने र बिहान सबेरै उठ्ने गर्दछन् उनीहरु स्वस्थ, बुद्धिमान तथा धनी हुन्छन् । बिहान सबेरै उठ्नाले स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ । बिहानको समयमा मानिसको इच्छा शक्ति उच्च हुन्छ र दिन लाग्दै गएपछि यसमा कमी आउँछ । त्यसैले बिहानको समयमा सिर्जनात्मक सोँचाइ, समस्या समाधान जस्ता विषयमा बढि प्रभावकारी बन्दछ । त्यसैले बिहानको समयलाई बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । दिनभर कामको व्यस्तता तथा थकानको कारण हामीलाई चाँडै निद्रा लाग्छ र बिहान ढिलासम्म निद्रा खुल्दैन । बिहान ढिलासम्म सुत्नाले हाम्रो शरिर आलस्य हुनुका साथै तनाव बढ्ने हुन्छ । र हामी चाहेर पनि बिहान चाँडो उठ्न सक्दैनौं । त्यसैले हरेक दिन यी टिप्स अपनाउनुस्, जसले बिहान चाँडै उठ्नमा म
पहिले यो भिडियो हेर्नुस, ज्योतिषमा कुल १२ राशि हुने गर्दछन्। सबै राशिको ग्रह स्वामी अलग अलग हुन्छन्। यिनैका आधारमा पनि मानिसको स्वभावका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। जानिराखौँ यदी समान राशि हुने व्यक्तिले विवाह गर्दा उनीहरुको वैवाहिक जीवन कस्तो हुने गर्दछ। मेष र मेषः ग्रह स्वामी मंगल मेष राशिका व्यक्ति मेहनती हुने गर्दछन्। यदी यस्ता व्यक्तिले समान राशि भएका व्यक्तिसँग विवाह गर्दा सुखमय हुने गर्दछ। वृष र वृषः ग्रह स्वामी शुक्र यी दुई राशिको वैवाहिक जीवन प्रेममय हुने गर्दछ। यिनीहरुको विवाहपनि जीवन सुखमय रहन्छ। मिथुन र मिथुनः ग्रह स्वामी बुध यस राशिका व्यक्ति शान्त र चिन्तित रहने गर्दछन्। यदी यी दुई राशिका व्यक्तिले विवाह गर्दा जीवन सुखमय हुने गर्दछ। कर्कट र कर्कटः ग्रह स्वामी चन्द्र यदी यी दुई राशिका व्यक्तिले विवाह गरेमा बीच-बीचमा वाद विवाद भइरहन्छ र चिन्ता बढ्ने गर्
हेर्नुस यो भिडियो, हाम्रो आसपास केहि यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् , जसले आफ्नो जीवनको मुस्किल भन्दा मुस्किल परिस्थिति पनि हल गर्छन् | यिनीहरुलाई देखेर मनमा यो कुरा आउन सक्छ कि यिनीहरुमा त्यस्तो के गुण छ त ? ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केहि राशिका व्यक्तिहरु हुन्छन् जसको भाग्य निकै बलियो हुन्छ | यतिमात्र होइन यिनीहरुको भाग्यको असर उनीहरुको जीवन साथीमा पनि पर्छ | वृष राशि शुक्र ग्र’ह यस राशिको स्वामी हो, जसका कारण अरु राशिका व्यक्तिहरु यस राशिका व्यक्तिसँग सजिलै आकर्षित हुन्छन्। यो मानिन्छ कि यस राशि का मानिस निकै भाग्यमानी हुन्छन्। यो विश्वास छ कि यो राशिका मानिसहरुलाई सम्मान र धनको कहिल्यै अभाव हुँदैन। कर्कट राशि चन्द्रमा कर्कट राशिको स्वामी हो। यो राशिका मानिस धेरै मेहनती हुन्छन्। यस राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनमा आफैँ परिश्रम गरेर सफलता पाउँछन्। यिनीहरुलाई भाग्यले पनि सधैं साथ